किन बयान फेरिन महराको यौन दुव्र्यबहारका विषयमा पीडित महिलाले? – Dcnepal
किन बयान फेरिन महराको यौन दुव्र्यबहारका विषयमा पीडित महिलाले?
प्रकाशित : २०७६ असोज १५ गते ७:२२
काठमाडौं। यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा मुछिएपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६(ख) अनुसार उनले राजीनामा दिएका हुन् र उनको राजीनामासँगै सभामुख पद रिक्त भएको छ ।
संविधानमै सभामुखले उपसभामुखलाई राजीनामा बुझाउने व्यवस्था छ । लिखित राजीनामापत्र बुझाएपछि स्वतः पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुख महराले भने राजीनामापत्रमा ‘छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु,’ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । राजधानी दैनिकबाट